Agụụ oyi, Ifuru agụụ oyi, Foods agụụ oyi - ALLCOLD
I nwere ike iri ya
The fresres nri
ALLCOLD bụ onye ndu ụwa nke agụụ na ngwọta dị jụụ & n'ichepụta ihe na-ekpo ọkụ agụụ, jikọtara ya na SEMCOLD USA (tinyere na agụụ agụụ na friji ihe karịrị afọ 80), Ndị na-ekpo ọkụ ọkụ anyị ezubere maka inine akwụkwọ nri, Fresh Fresh Flow, Nri achicha, Central Kitchen, Mushrooms, nri esi nri & osikapa sushi, compost & turf wdg.
Ahụmahụ & AKW &KWỌ AKWUKWỌ AKWUKWỌ AKW .KWỌ
ALLCOLD bụ onye ndu ụwa nke agụụ na ngwọta dị jụụ & Nrụpụta ihe na-ekpo ọkụ agụụ
ALLCOLD bụ ụlọ ọrụ dị elu na-enye aka maka R&D ma nwee ụlọ ọrụ 10,000m2 na Dongguan China
AKW DISKWỌ KAS P
Nri anụ ọkụ ọkụ
Otutu obi jụrụ, ọ na-ewe ihe dịka nkeji 30 iji jụụ site na 100 ℃ gbadaa karịa 10 ℃. Otu akwa jụrụ oyi na etiti na nri. Ọ dịghị pụrụ iche chọrọ na nha, ọdịdị na tojupụtara mode nke ngwaahịa na Ọ dịghị ”abụọ mmetọ” maka jụrụ na a n'ụzọ zuru ezu-dịpụrụ adịpụ igwe anaghị agba nchara ụlọ. Ngwa ngwa ngwa gafee ọnọdụ okpomọkụ nke 25-50 ℃ nke dị mma maka ụdị nje. AllCOLD agụụ coolers ugbu a na-ọtụtụ-eji na obi jụrụ nke ...
Steamed Food agụụ agụụ
Agụụ oyi elsdị & nkọwa: agụụ oyi Main Njirimara 1.Fast jụrụ ọsọ. Nri esiri esi nri 10 ℃ naanị mkpa 20-30, nri esi nri jụrụ 20 to n'ime 10-20min. 2.Cooling uniform.Under agụụ agụụ, nri mma si isi ka elu. 3.Two-ogbo jụrụ iji belata nri mmiri ọnwụ. Site na elu okpomọkụ ruo 60 ℃, a ga-eme ka nri dị jụụ ngwa ngwa iji zere nje bacteria ngwa ngwa, nchekwa nke abụọ ga-eme ka obi jụrụ jụụ iji belata ọnwụ vepo, na mmelite nri nri. 4.M ...
Ime achịcha agụụ oyi
ANAKP AdRvant Vacuum Cooling Uru? 1.Ultra-Fast jụrụ usoro 20mins / okirikiri. 2. Ogologo oge ndụ site na 2-3times. 3.Energy na-azọpụta karịa 40%. 4.Minimum mbibi nke arụpụta. Ntak-eji agụụ jụrụ? Ozugbo egbute ya, ihe ọhụụ niile na-abanye na nrụgide. Nchegbu a na-ebute iku ume (iku ume) na transpiration (ọsụsọ) nke kachasị na-akpalite site na okpomọkụ. Akwukwo nri gi na akwukwo nri gi na iku ume gi nwere ike belata nke oma site na 75% ma obu karia. O ...
Turfs agụụ oyi
Uru nke agụụ oyi (1) Nọgidenụ na nke kacha mma mma nke turfs. (2) Oge obi jụrụ dị mkpụmkpụ, n'ozuzu ihe dị ka nkeji 15- 20. Ngwa ngwa, dị ọcha na enweghị mmetọ. Nwere ike igbochi ma ọ bụ gbuo botrytis na ụmụ ahụhụ.Ọ nwere ike 'gwọọ obere mbibi n'elu ahịhịa na ahịhịa ma ọ bụ na ọ gaghị aga n'ihu ịgbasa. (4) Mmiri a wepụrụ weghaara naanị 2% -3% nke ibu ahụ, enweghị mkpocha na nrụrụ mpaghara (5) Ọ bụrụgodi na a na-egbute turfs na mmiri ozuzo, enwere ike wepu mmiri dị n'elu ...
Mushrooms agụụ oyi
Njirimara nke agụụ oyi (1) Jide ihe kachasị mma na mma (agba, okpukpo, uto na nri) nke ero! (2) Oge obi jụrụ dị mkpụmkpụ, n'ozuzu ihe dị ka nkeji 15- 20. Ngwa ngwa, dị ọcha na enweghị mmetọ. (3) Nwere ike igbochi ma ọ bụ gbuo botrytis na ụmụ ahụhụ. (4) Mmiri ahụ ewepụrụ nwere naanị 2% -3% nke ibu ahụ, enweghị mkpo na mpaghara nrụrụ (5) Ọnọdụ okpomọkụ nke isi na elu hà. (6) N'ihi ịjụ oyi, ero ahụ nwere ike idowe ogologo oge. Mere anyị ji agụụ c ...
Herbs agụụ oyi
Uru nke agụụ oyi (1) Debe mma kacha mma nke herbs. (2) Oge obi jụrụ dị mkpụmkpụ, n'ozuzu ihe dị ka nkeji 15- 20. Ngwa ngwa, dị ọcha na enweghị mmetọ. Enwere ike igbochi ma ọ bụ gbuo botrytis na ụmụ ahụhụ. (4) Mmiri a wepụrụ wepụtara naanị 2% -3% nke ibu ahụ, enweghị mkpocha na nrụrụ mpaghara (5) Ọ bụrụgodi na a na-egbute ahihia na mmiri ozuzo, enwere ike wepu mmiri n'elu mmiri n'okpuru agụụ. (6) Du ...
Mpaghara niile, Xiajie, Qishi Town, Dongguan, Guangdong Province, China